Sofia Wilton's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Sofia Wilton
Sofia Wilton mutori venhau nehunyanzvi asi anonyora nyaya pfupi munguva yake yekusarudzika. Nhau dzake dzinoburitswa mumapepanhau emuno uye dzinonyatso kuzivikanwa nenyaya dzake dzinonakidza. Iye anonyorawo mablog e Gungwa B2B zvine chekuita nezvezvinoitika. Semunyori anodisa, anoshandisa ese ake emahara nguva kunyora. Iye anogara kuNew York asi ari kufamba nguva zhinji nekuda kwebasa rake. Izvi zvinomupa iye mukana wekutsvaga nzvimbo nyowani uye zvakare kusanganisira zvaakasangana nazvo munyaya dzake zvichipa manzwiro chaiwo.
Kushambadzira Dhata: Iyo Kiyi yekumira kunze mu2021 uye Beyond
Mugovera, January 16, 2021 Mugovera, January 16, 2021 Sofia Wilton
Muzuva ranhasi nezera, hapana chikonzero chekusaziva kuti ndiani wekushambadzira zvigadzirwa zvako uye masevhisi kuna, uye izvo zvinoda vatengi vako. Nekuuya kwekushambadzira dhatabhesi uye humwe hunyanzvi-hunotungamirwa netekinoroji, aenda mazuva ekusafunga, asina kusarudzwa, uye akajairika kushambadzira. Pfupi Nhoroondo Yekutarisa Kusati kwa1995, kushambadzira kwaiwanzoitwa kuburikidza netsamba uye kushambadzira. Mushure me1995, nekuuya kweemail tekinoroji, kushambadzira kwakave kwakanyatsojeka. It